२०७४ श्रावण २ सोमबार ०९:३८
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले विभिन्न कार्यक्रम गरी ५५ औं इन्जिनियर्स दिवस मनाउँदैछ । दिवस सोमबार (आज) र मंगलबार (भोलि) दुई दिन मनाइँदैछ ।
दिवसको पहिलो दिन टेक्निकल सेसनको उद्घाटन प्रा.डा. जीवराज पोखरेलले गरे । सोमबार इन्जिनियरहरु डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा तथा डा. गोविन्दराज पोखरेलले कि नोट स्पीकरको रुपमा आफ्नो धारणा राखे ।
उनीहरु भूकम्पपछि स्वदेशमै निर्मित निर्माण सामग्रीको प्रयोगबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दिवसको पहिलो दिन विभिन्न सेसनहरु चलेको थियो । दोस्रो सेसनमा एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिराम श्रेष्ठलगायतले बोलेका थिए ।
निर्वाचनका लागि ६० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन, हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा
काठमाडौं, भदौ ३१ । असोज २ गते हुने स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी पूरा भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ